Isniin, Julaay 27, 2020
Laga bilaabo maanta, Isniinta, Julaay 27, 2020 Xarunta Codeynta ee ku taal Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah ee suuqa hoose ee Gresham way u furan tahaydadka reer Portland ee degan ama ka shaqeeya Gresham. Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building ee Koonfurbari Portland sidoo kale way u furan tahay doorashada tartanka gaarka ah. Labada gooboodba waxay raacayaan dhamaan talooyinka amaanka ee ay bixisay Xarunta Kahortaga iyo Xakamaynta Xanuunku (Center for Disease Control and Prevention, CDC)oo ay ku jiraan xidhashada waji gashadka iyo tilmaamaha kala fogaanshaha. Cod bixiyayaal badani waxay sidoo kale ku buuxin karaan online ahaan. Wixii su'aalo ah, la hadal 503-988 VOTE (8683).
Xarunta Codbixinta suuqa hoose ee Gresham, codeeyayaashu waxay ku badalan karaan waraaqaha codaynta ee lumay ama waxyeeloobay ama waxay ka cusboonaysiin karaan macluumaadkooda codeynta. Codeeyayaasha qaba laxaad la'aanta waxay heli karaan kaalmo. Codeeyayaasha ku hadla luuqad aan Ingiriisi ahayn waxay heli karaan kaalmo luuqada ay doorbidaan ah. Shaqaalaha doorashooyinka gaarka ah waxay diyaar u yihiin su'aalaha ama wixii kale ee kaalmo la xidhiidho ah caawimaada.
Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building waxay ku taalaa1040 SE Morrison Street, Portland. Xarunta Cod Bixinta ku taala gudaha Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah ee 600 NE 8th Street ee u dhaw Xarunta Tareenka Gresham iyo baarkin bilaash ah. Xarunta Cod Bixintu waxay furan tahay Julaay 27 Maalinta Codeynta, Agoosto 11. Saacada shaqada ee caadiga ah waxaa weeye 8:00 Subaxnimo - 5:00 Galabnimo Isniin - Jimce. Labada goobood ee Xarunta Cod Bixinta ee Gresham iyo Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building waxay kordhiyeen saacada kahor doorashada.
Xarunta Cod Bixinta gudaha Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah ee Gresham:
Sabti, Agoosto, 8, 2020 - 10:00 Subaxnimo - 2:00 Galabnimo
Isniin, Agoosto 10, 2020 - 8:00 Subaxnimo - 7:00 Habeenimo
Maalinta Doorashada: Talaato, Agoosto 11, 2020, 7:00 Subaxnim - 8:00 Galabnimo
Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building ee koonfurbari Portland:
Arbaco, Agoosto 5, 2020 - 8:00 Subaxnimo - 7:00 Habeenimo
Khamiis, Agoosto 6, 2020 - 8:00 Subaxnimo - 7:00 Habeenimo
Sabti, Agoosto 10, 2020 - 8:00 Subaxnimo - 7:00 Galabnimo
Maalinta Doorashada: Talaato Agoosto 11, 2020, 7:00 Subaxnimo - 8:00 Galabnimo
Waraaqaha codaynta waxaa kaliya la aqbalayaa saacada ay furan yihiin Xaruntamaha Cod Bixintu. Sanduuqa ugu dhaw ee 24-saacadood shaqaynaya ee codayntu waxa uu ku yaalaa baarkinka Laybareeriga Gresham ee 385 NW Miller Avenue. Si aad u hesho goobaha waraaqaha codaynta kale ee Degmada Multnomah, waxa aad qabataa online ahaan multco.us/dropsites. Xasuuso, waxa aad boosta ugu dirtaa warqadaada codaynta boosta bilaashka ah Khamiista, Agoosto (wakhti hore hadii aad ka maqan tahay gobolka) ama waxa aad keentaa Goobaha Codaynta Sanduuqyadu Yaalaan ee Rasmiga ah ee Oregon ugu danbayn 8:00 Habeenimo, Agoosto, 11, 2020.
Doorashada Degmada Multnomah waxay bixisaa turjubaad, bilaash ah ee cid kasta oo u baahan codaynta oo ku qoran luuqad aan Ingiriisi ahayn. Macluumaadka codaynta iyo doorashooyinka gaarka ah waxaa laga heli karaa iyaga oo ku qoran sagaal luuqadood online ahaan www.mcelections.org.
Waraaqaha codaynta waa in ugu danbayn ay nasoo gaadhaan 8:00 Habeenimo Talaato, Agoosto, 2020. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Doorashada Codaynta Gaarka ah ee Agoosto 11 ama Xarunta Cod Bixinta, fadlan booqo www.mcelections.org.